Ipropathi ethengiswayo emazantsi Tenerife!
isixeko Zonke iidolophuAdejeAgua DulceI-AlcalaI-ArafoArguayoUAricoronaI-BajamarBuenavista Del NorteIBuenavista GalufaI-CandelariaChayofaI-ChiguergueI-ChioECosta Del SilencioUCueva De PolvoUCueva Del VientoEl JaralEl MedanoEl PorísEl PrisEl SauzalEl TanqueIFasniaIGarachicoIGenovÉsUGranadilla De AbonaGuia De IsoraIcod De Los VinosI-IguesteJoverILa CalderaLa Caleta De GuimarLa Caleta De InterianLa LagunaI-La MontañetaLa OrotavaLa ReinaLa VegaI-Las AguasLas AmericasI-Las CaletillasI-Las CaletitasI-Las ErasLas GalletasI-Las LagunetasI-Las ManchasI-Las PortelasI-Las RosasLos AbrigosLos CristianosI-Los GigantesLos RealejosI-Los SilosMascaPalm MarIPalmarIParque De La ReinaI-Playa De La ArenaPlaya De San JuanPlaya ParaisoPlaya San Marcosplaya SiboraPuertito De GuimarIPuerto De La CruzIPuerto De SantiagoIPunta De HidalgoRadazulISan AndresISan EugenioSan IsidroSan José De Los LlanosISan Juan De La RamblaSanta UrsulaSantiago Del TeideSotavientoTabladoTacoronteTagananaTajaoIsiTamaimoTauchoTejina De IsoraTierra Del TrigoValle De Guerra
Iibhedi Zokulala11 21 311224345679
Iibhati Zokuhlambela11 21 323456
Ipropathi iyathengiswa kumazantsi emozulu yeTenerife ngemozulu yasentwasahlobo nehlobo elininzi lonyaka unyaka wonke!
Kubalulekile ukuba ungadideki ubume bendawo ye-Tenerife enemozulu esezantsi!
Ekugqibeleni eyona nto ibaluleke kakhulu yimozulu! Abanye abantu bathanda ilanga elomileyo nelomileyo, abanye benganelanga kangako, kodwa buluhlaza kakhulu kwi-Tenerife.
Nantsi imephu yemozulu yesi siqithi - enyanisweni yimephu yeemvula. I umbala obomvu-orenji umele abantu abayibize ngokuba yiSouth Tenerife (ngamanye amaxesha ngaphandle kokuyazi le nto). Kananjalo kuya kufuneka uthathele ingqalelo, loo apx. yonke i-100 yeemitha ukusuka kwiqondo lobushushu lonxweme lehla nge-1ºC, njengokuba unyuka intaba.
Njengoko ubona kukho iindawo ezithile zemozulu esemaZantsi kule ndawo! Umzekelo, uSanta Cruz noIgueste, phantse ukuba bangasemantla-kuninzi lweTenerife, eneneni banemozulu yehlobo yasentwasahlobo nexesha lonyaka.
Kwindlu entsha yakhiwa e-El Medano!
U-El Medano, uGranadilla de Abona Tenerife
Yakha indlu entsha enamagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela eli-2, itafile kunye negadi yeemitha ezili-1 zizonke kwisakhiwo esitsha e-El Medano, Tenerife! ...
Indlu eVuselelweyo ePlaya De San Juan!
IPlaya de San Juan, iGuia de Isora Tenerife
Igumbi lokulala eliqaqambileyo 2 kwindawo ethuleyo yePlaya de San Juan, Tenerife! Esi sakhiwo sibekwe kumgangatho wesibini ...
Igumbi elikufuphi neLas Teresitas Ibhishi!
ISan Andres, iSanta Cruz de Tenerife Tenerife
Kuyathengiswa: Indawo entle eSan Andres, Tenerife! Ihlala kwindawo ezolileyo yedolophu kwi-1 km ukusuka kunxweme oludumileyo lweLas Teresitas. Entle...
Igumbi elihle e-Los Gigantes!
Iflethi entle eLos Gigantes, Tenerife! Ukujonga kwePanoriki elwandle, ematyeni nakwilwandle laseLos Gigantes. Indawo egqibeleleyo kwindawo ezolileyo ...
Indlu eSisitayile e-Alcalá 50m Ukusuka kuLwandle!
I-Alcala, iGuia de Isora Tenerife
Uyathengisa: Indlu ye-4 yokulala kwindlwana ye-Alcala, Guia de Isora, Tenerife! Indawo egqibeleleyo ziimitha ezingama-50 ukusuka elwandle, zimbalwa amanyathelo ...
Indawo yokujonga amanzi olwandle engaqhelekanga neTerrace emangalisayo!
Indlu yokuqala equkayo yolwandlekazi ayithengiswa ePlaya de la Arena, Tenerife! Uziva ngathi uhlala kwinqanawa yokuhamba ngenqanawa. Itreyini iphelele ...
Indlu edibeneyo enombono kunye neGadi
I-Las Manchas, iSantiago del Teide Tenerife
UKUthengiswa: Indlu edibeneyo kwilali entle yeLas Manchas, iSantiago del Teide, iTenerife! Iimbono ezingama-360º zepaneli yolwandle, entlanjeni naseLa ...
Ibala eliphangaleleyo lolwandle ePaseya ePlaya Arena!
IPlaya de la Arena, iSantiago del Teide Tenerife
Indlu entle i-50 yeemitha ukusuka elwandle ePlaya de la Arena, Tenerife! Indawo egqibeleleyo kweyona ndawo idolophu! Iphaneli ...
Igumbi elinelayisensi yokhenketho eArona!
Ithengiswa indawo yokuhlala kunye nelayisensi yokhenketho eArona, Tenerife! Le ndlu inegumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlala eli-1, igumbi lokuhlala nekhitshi, igumbi elingaphakathi lendlu kunye ...
Indlu e-Alcalá, i-Tenerife eneLayisensi yoKhenketho !!
Iyathengiswa eAlla, Tenerife! Ikhaya elibanzi kwimigangatho emi-3: Kumgangatho ophantsi: igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye ne-wc. Kumgangatho wokuqala: igumbi lokulala eli-1, 3 kunye neyabucala ...
I-Condo / Townhome / Umda weKhaya, iNdlu
I-penthouse 50m ukusuka kuLwandle e-Las Galletas, Arona!
I-Las Galletas, i-Arona Tenerife
Igumbi elithengiswayo eLas Galletas, eArona, eTenerife. Izimvo zolwandle ezimangalisayo! Indawo egqibeleleyo kufutshane nonxweme embindini wedolophu! Ixabiso elingafikeleleki! ...
Ukuphindaphindeka kunye neGarage, iPhuli kunye neMiboniso yolwandle yePanoramic!
I-Las Caletillas, uChelelaria Tenerife
UKUZithengisa eLas Caletillas, eCandelarias, eTenerife! Isiphindaphindeka esikhulu esakhiwe nge-85m2 eyakhiwe + i-35m indawo yetafile yolwandle. Inelifti, igaraji ...
Igumbi, i-Condo / Townhome / Umda weKhaya, eDuplex
Igumbi leshumi igumbi elinemibono yePanoramic ePlaya Paraiso!
I-Playa Paraiso, Adeje Tenerife
Indlu entle iyathengiswa ePlaya Paraíso, Tenerife phambi kwe Hard Hard Café! Esi sakhiwo siseParaíso del Sur ...
Indlu yokubuyisa + imihlaba eneembono eTaucho, Adeje!
I-Finca ene-Vineyard kunye neMibono yePanorama yolwandle!
I-Guia de Isora, iGuia de Isora Tenerife
UKUthengisa: I-finca entle eJaral, Guia de Isora, Tenerife! I-Finca eneembono ezintle zephaneli ngaphezulu konxweme ukusuka eAdeje ukuya eLos Gigantes! Mbini...
Indlu yeLizwe, iFinca, indlu, iWinery
Indlu entle yelizwe iyathengiswa kufutshane neTaganana!
Indlu entle yelizwe kwindawo yaseTaganana, Tenerife! I-80 sq.m. indlu kwi-800 sq.m. Isakhiwo, igumbi eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, ikhitshi elungiselelwe. Ipropathi ...
Indawo yezoqoqosho kufutshane neBetho ese-El Poris!
Ukuthengisa: Indawo encinci yokuhlala ithengisiwe e-El Poris de Abona, Tenerife iimitha ezimbalwa ukusuka elunxwemeni kunye promenade! Iflethi yile ...
Indawo ebanzi e Playa De San Juan!
Igumbi lokuthengisa likwimo elungileyo kakhulu kwaye libekwe kakhulu ePlaya de San Juan, Guia de Isora, Tenerife. Inikezwe ngokupheleleyo, ...
Igumbi elikwiLaguna Park I
I-Las America, Adeje Tenerife
Ukuthengisa: Igumbi elikwiLaguna Park endikwiLas American (Costa Adeje), Tenerife! Igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1, ikhitshi elizimeleyo, inombolo yomgangatho 2, igumbi elingaphakathi ...
I-villa kwisiqithi saseCrab, eLos Gigantes!
Uyathengisa: Indlu enkulu enendawo yayo, indawo yokubhukuda kunye negaraji eCrab Island, eLos Gignates, eTenerife! Indlu inento yokuhlala ...
Izindlu ezibini ezinemibono emangalisayo kwiLos Gigantes Cliffs!
Ipropathi ebekwe ngokugqibeleleyo kwisitalato esithuleyo sokuhlala esinemibalabala emibalabala eLos Gigantes, Santiago del Teide, Tenerife! Ezi zimbini ...
Igumbi, i-Condo / i-Townhome / Umgaqo weKhaya, iNdlu
Indawo egqibeleleyo e-Front ye-La Arena Beach!
Ukuthengisa: Igumbi elisedolophini “Tagara”, Playa de la Arena, Tenerife! Indawo egqibeleleyo engaphantsi kweemitha ezili-100 ukusuka kunxweme olunesanti iLa Arena! Ilanga elinethambo ...
Indawo engaphambi kwegumbi elikwi-Playa De San Juan!
UKUZithengisa: Indawo ebanzi kunye neyindlu yanamhlanje kulwandle lwasendlwini ye-Playa de San Juan, Tenerife! Indawo engaqhelekanga ngokukodwa phambi kwe ...
INtlanzi enkulu yoLwandle lwaseKhaya eLor Medano!
UKUthengisa: Ipropati entle yendawo enkulu e-El Medano yolwandle ngaphambili, Tenerife! Indlu yedolophu enamagumbi amathathu negaraji yabucala enesango lokungena ngqo ukusuka kwigaraji ukuya ...
Ububanzi boLwandle oluPhambi kweNdlu ePunta Negra, ePlaya De La Arena
Indlu enkulu evalelweyo kwiimitha ezili-10 ukusuka elwandle. Enye yezona ndawo zilungileyo eTenerife. Iphuli yoluntu. Igaraji yabucala. Ilanga liphuma ...
Ulwandle lokujonga iVenkile ePalm Mar!
UKUthengiswa: Igumbi elisedolophini “Flamingo” ePalm-mar, eTenerife! Indawo enkulu kakhulu yendawo kuphela ziimitha ezingama-450 ukusuka elwandle. Imiboniso yePanoriki edolophini ...
Igumbi elingasentla lePhandle kwi-El Medano!
Ukuthengisa: Ipropathi enkulu yangaphambili yolwandle e-El Medano, Tenerife! Umqolo wokuqala wolwandle! Iimbono zephaneli emangalisayo! Indlu iyathengiswa, kwaye yindawo yokupaka ...
Ulwandle Jonga igumbi kwigumbi elikufuphi neLa Tejita Beach!
UKUZithengisa: Indlu enkulu eneegadi kunye neelwandle jonga e-El Medano, Tenrife! Igumbi lokulala eli-2 (10m + 8m) + igumbi eli-1 ngaphandle kwefestile ...
Igumbi elifanelekileyo eSan Isidro!
ISan Isidro, eGranadilla de Abona Tenerife
UKUthengiswa: ukwahlula-hlulwa eSan Isidro, iTenerife ebekwe kakuhle, embindini we-avenida Santa Cruz. Ikhitshi epheleleyo ekwimeko elungileyo, kwigumbi lokuhlambela, ...
Igumbi eli-100m ukusuka kuLwandlekazi!
IPuerto de Santiago, iSantiago del Teide Tenerife
Uyathengisa: Apha ePuerto Santiago iimitha ezili-100 ukusuka elwandle. Yindlu ebekwe kumgangatho wokuqala apho kwenye ...
Ulwandle olukhulu olungaphambili lwegumbi 215 Sq.m.!
I-Radazul, iCartelaria Tenerife
Uyathengisa: Indawo ethe gabalala kunye nenqabileyo yolwandle ngaphambili eRadazul, Tenerife! Indawo entle yokuchithela kufutshane nedolophu yaseSanta Cruz. Iphaneli emangalisayo ...
Igumbi elingaphambi kwegumbi lePaseji - iPlaya Chica
Uyathengisa: Ulwakhiwo lwangaphambili lolwandle kufutshane nePlaya Chica, iTenerife! I-Perctly ibekwe kumbindi wedolophu endala ePuerto de Santiago! Izimvo ezintle ...
Igumbi elihlaziyiweyo eVillas Canarias, Adeje
Ithengiswa eCosta Adeje, eTenerife: Kutsha nje kuhlaziywa izakhiwo kwigumbi "leVillas Canarias" kufutshane neziko lokuthenga le "Gran Sur". Indawo entle kakhulu ngaphakathi kobunzima. Phantsi ...
Indlu ye-Cavefront ye-Beach, i-Tenerife yo-South Coast
UCandelaria, uChelelaria Tenerife
Indlu entle esecaleni komqolomba iyathengiswa ePlaya Viuda, eCandelaria, eSouth Tenerife. Indawo efanelekileyo yokuphumla. Ukufikelela kakhulu kwindlela enkulu ye-TF-1 ...
I-Condo / Townhome / Umda weKhaya, iDuplex, iNdlu
Igumbi 50 Imitha ukusuka elwandle!
Igumbi lama-50 eemitha ukusuka elunxwemeni eCofelaria !! Indawo elungileyo kakhulu kunye nokugcinwa ngokugqibeleleyo! Kwindawo enamalungelo. Kumgangatho we-7 ngeLift. Ithamsanqa. Ukuqubha ...
Igumbi eSan Eugenio, eCosta Adeje
ISan Eugenio, Adeje Tenerife
Igumbi lokuthengisa liyathengiswa eCosta Adeje, eSan Eugenio, kwingingqi yeTorviscas Alto eseCaledonia Park. Igumbi lithengisiwe linempahla epheleleyo. Igumbi lokuhlala, igumbi lokulala eli-1, ...
Ulwandle lwangaphambili lwendlu + kwiiNdawo ezi-4 zokuphumla!
UKUZithengisa ngokuthe gca e-OCEAN! IAlmaciga ipaki yasemaphandleni yaseAnaga! Ukwakha izindlu ezine zokuhlala + izindlu ezizimeleyo ezirentwa ngoku njengamakhaya eeholide ...
Igumbi, Comment, House Country, House, Investment
Indlu enkulu ehlaziyiweyo ePalm-mar!
UKUZE uthengise: indlu ehliswe ngokupheleleyo. Ifumaneka kwindawo yokuhlala yePalm Mar, Arona. Inamagumbi amakhulu amathathu okulala, elinye ...
Indlu enkulu enezindlu ezi-4 zeedolophu ezingama-300m ukusuka eLa Arena Beach !!
Ubunewunewu 4 yodolophu ekuthengiswa kuyo ePlaya de la Arena, Tenerife! Indawo efanelekileyo i-150 yeemayile ukusuka elwandle kunye neemitha ezingama-300 ukusuka ...
Igumbi lokujonga igumbi lolwandle e “olivia ilanga”
Ithengiswa kule ndlu yangoku ePlaya de la Arena, eTenerife. Indawo yaseLos Gigantes. Ithala elikhulu lembombo Ubunzima banamhlanje ngokuqubha okukhulu ...
Indlu enkulu yoLwandlekazi ngeeNdawo eziMangalisayo !!
UKUthengisa: Ipropathi engaselwandle engaqhelekanga kwidolophu engaselunxwemeni ye-El Poris, emazantsi eTenerife, kwiiCanary Islands, eSpain! Igama "Porís" kwi ...
Indlu yeeMetro ezingama-60 ezivela kuLwandle eAlcala !!
UKUZithengisa: Indawo enkulu enezindlu ezi-4 eAlcala, eGuia de Isora, eTenerife! Indawo egqibeleleyo ziimitha ezingama-60 ukusuka elwandle ngeembono zephaneli !! Imimandla emi-3, ...
Igumbi eligcweleyo eLos Gigantes!
UKUZithengisa: Iflethi entle kwizakhiwo ezihle eLos Gigantes, Tenerife! Amachibi amabini amakhulu okuqubha kunye neJacuzsi! Indawo enkulu yokujonga umbono wolwandle! Umoya ...
Igumbi lokuphumla eDowntown Los Gigantes
UKUthengiswa: Indawo ebonakalayo edolophini eLos Gigantes, Tenerife! Indawo egqibeleleyo ngqo embindini wedolophu, amanyathelo nje ambalwa ukusuka ...
Ingxangxasi enkulu yendawo enkulu eneembono zepaneli!
Ukuthengisa: Ipropathi ebalaseleyo ngombono wolwandle ngepanolig eLos Gigantes, Tenerife! Esi sakhiwo sibekwe kumgangatho wokugqibela sinomakhelwane omnye nje ngqo ....
Indawo yokuGcina ulwandle enePhuli
Kutsha nje kuhlaziywa indawo yokuhlala ethengiswa ePlaya de la Arena, Tenerife! Ukujonga ulwandle phezu kophahla olunophahla kunika imvakalelo ye-Mediterranean. Inezinto ezifanelekileyo kwaye zixhotyisiwe. Ukuqubha ...
I-Finca-villa ekufutshane nePlaya De La Arena
IPlaya de la Arena, iGuia de Isora
Kuthengiswa iifinca ezinkulu eCueva de Polvo, kufutshane nePlaya de la Arena, iLos Gigantes, iTenerife. Indawo egqibeleleyo. Ngapha kwehektare eziyi-1,5 ...
Igumbi elinemiboniso yolwandle ePuerto Santiago!
UKUZithengisa: Indawo entle yokulala enembonakalo yephaneli ePuerto de Santiago, Tenerife! Amagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlala elikhulu! Isiza esimangalisayo selanga elinezinto ezigqunywe lulwandle ...
Indlu egqwesileyo i-150m Ukusuka elwandle!
UKUZithengisa: Indawo entle kakhulu ngokubona ulwandle kwindawo yakudala iPuerto de Santiago, Tenerife! Indawo efanelekileyo i-150m ukusuka "Chica" elunxwemeni kunye ...
Igumbi elihle leNdawo yokuThotyelwa kweLwandlekazi entle!
UKUthengiswa: Ipropathi ekhethekileyo ePlaya de la Arena, Tenerife! Iflethi entle kakhulu kwaye inomtsalane compact nje kwiimitha ezili-100 ukusuka eLa Arena ...
Igumbi elikhulu ePuerto Santiago !!
UKUthengiswa: Igumbi ePuerto Santiago, Tenerife !! Indlu entle embindini wePuerto Santiago. Ibanzi kwaye iyasebenza !! Ilungele usapho kunye nabantwana. Kufutshane nendawo yokudlala, ...
Igumbi elinobunewunewu + i-infinity Pool eluphahleni !!
UKUthengisa: Indawo yokuhlala enexabiso eliphakamileyo elinemiboniso yolwandle kunye nephuli yendawo yoluntu ePlaya de la Arena, Tenerife! Ububanzi bophahla lwakhiwo elineendawo ezimbini ezinkulu ...
Indlu yokubuyisa iZiko leSan Andres!
UKUthengiswa: Indlu edibeneyo embindini weSun Andres, Tenerife! Indawo egqibeleleyo yenye yezona ndlela zintle zedolophu. Ziyi-150 ...
Igumbi lokuphumla elikufuphi neLa Arena eLwandle!
UKUZithengisa: Indawo entle yekona kufutshane nolwandle lwaseLa Arena, iTenerife! Unxweme luhamba nje imizuzu embalwa ngonyawo! Iimboniselo zolwandle kwifestile yegumbi lokulala ...
Duplex + Tshixa iGarage eyi-200m Ukusuka elwandle!
UKUZithengisa: Ipropathi emangalisayo eSan Miguel de Tajao, Tenerife! Ngama-200 eemitha ukusuka elunxwemeni, kwizibuko lokuloba nakwiindawo zokuloba ezilungileyo ...
Igumbi + lokupaka i-100m Ukususela kuLwandle!
UKUthengiswa: Igumbi lokumisa izithuthi kwigaraji engaphantsi komhlaba, ePlaya de la Arena, eTenerife! I-100 yeemitha ukusuka elwandle! Imizuzu emibini ukuya ...
Icandelo legumbi elikwi-Patio ePuerto De Santiago!
UKUthengiswa: Indawo entle embindini wePuerto de Santiago, Tenerife! Ifakwe kumgangatho wesibini wesakhiwo esihle kufutshane neLidl kunye ...
Ingaphandle ebanzi yendawo egqibeleleyo e-Los Gigantes
ILos Gigantes, iSantiago del Teide
Indlu engaphandle yodwa yentengiso yegumbi lokuthengisa eLos Gigantes, Tenerife. Iimbono ezinkulu zephaneli yolwandle, iilwandle zaseLos Gigantes kunye neNtaba yeTiide! Bucala kakhulu kwaye ...
Igumbi elikhulu leThala lendawo enkulu eCosta Del Silencio!
ICosta del Silencio, Arona Tenerife
UKUthengiswa: Indawo yokulala e-2 egqibeleleyo eCosta del Silencio, Tenerife! Uluntu oluhle kakhulu edolophini kunye neenkundla zamatyala e-tennis, echibini lokubhukuda kunye ...
Igumbi langoku neliPhangaleleyo ePuerto De Santiago!
UKUZithengisa: Indawo enkulu kunye nepropathi yanamhlanje embindini wePuerto de Santiago, Tenerife! Kusele nje amanyathelo ambalwa ukusuka kwiplaza, imivalo, iivenkile ezinkulu, ...
Indlu entle eneembono zolwandle eGuia De Isora!
UKUZithengisa: Ububanzi kwaye bubuhle bomqolo ekhaya embindini weGuia de Isora, Tenerife !! Indawo egqibeleleyo kwisitalato esithuleyo ngamanyathelo nje ambalwa ...
Izindlu ezibini + iPatio kwiPlani enye!
IArguayo, iGuia de Isora Tenerife
Izindlu ezimbini kwisiza esinye eArguayo, kufutshane neSantiago del Teide, iTenerife. Indawo iyamangalisa! Ilali ethuleyo yimizuzu nje eli-15 kude neLos ...
Igumbi lokuphumla elwandle + kwigaraji eseCandelaria !!!
Ukuthengisa: Indawo yokuhlala enomtsalane ziimitha ezingama-80 ukusuka kwizibuko lolwandle nakwilwandle eCandelaria, eTenerife !!! Indawo elungileyo kakhulu kunye nexabiso kwelinye ...
Indawo entle yeVilla-finca kufutshane neLos Gigantes!
UFinca uyathengiswa eLa Caldera kwimizuzu emi-5 yokuqhuba ukusuka eLos Gignates nasePlaya de la Arena, eTenerife. Indlu yanamhlanje ineephuli kunye ...
Indlu yeDolophu Ukuhlaziya eSantiago Del Teide !!
UKUthengiswa: Indlu yedolophu enepatio ukuze ihlaziye eSantiago del Teide, Tenerife !! Indawo enkulu ekumbindi wesitrato esikhulu ...
Igumbi eligudileyo elinayo neGarage eTamaimo!
Ithengiswa kwindawo entle eTamaimo, Tenerife! Iimbonakalo ezintle ezivela kwindawo yetreyini. Indawo yokupaka yabucala kwigaraji engaphantsi komhlaba. Abaphakamisi. Igumbi lokugcina elongezelelweyo ...
Kuthengiswa i-villa enkulu evalelweyo enombono wolwandle eLa Caldera, kwindlela esuka eLos Gigantes ukuya eTamaimo. Indawo ethe cwaka kwaye entle ngaphandle kwe ...
Igumbi eliphindiweyo elinombono wolwandle
Kuthengiswa izindlu ezintle ngombono wolwandle kunye neLos Gigantes emaweni ekwakhiweni kwebhedi eshushu. Igumbi linamagumbi amabini okulala, ...
Indlu ene Winery + Umhlaba uyathengiswa eTaucho !!
UKUthengiswa: Ipropathi entle eTaucho, Tenerife! Indawo efanelekileyo yokuhlala ngoxolo okanye irente yomsebenzi! Unakho ukuguqula indlu ibe zimbini ngokwahlukeneyo ...
Indlu entle nePatio eArico !!
IArico, uArico Tenerife
UKUthengisa: Ipropathi enkulu eArico Viejo, Tenerife! Indlu enkulu entle kwindawo entle! Amagumbi okulala angama-5, iikhitshi ezi-2, amagumbi amabini okuhlala, igumbi lokuhlambela eli-2, ...
Indawo ebanzi kwiZiko lasePuerto De Santiago!
UKUZithengisa: Indawo entle yokuhlala embindini wePuerto de Santiago, Tenerife! Amagumbi okulala ayi-3 kunye negumbi lokuhlala elikhulu nekhitshi. Ithala lembombo lepaneli. Yabucala ...
Isiza sokwakhiwa kweedolophu ezinombono wolwandle kufutshane nePlaza De Tamaimo !!
UKUZithengisa: Ubuninzi beedolophu ezinkulu kufutshane nePlaza de Tamaimo, Tenerife! Indawo egqibeleleyo enombono wolwandle encitshiswa yibharanco yaseTamaimo. Akukho mntu uya kwakha ...
Isiza sakhiwo sase-Urban esinee-Ocean Views eTamaimo !!
UKUZithengisa: 700 sq.m. Ipropathi eTamaimo, Tenerife! I-100% isiza sokwakha edolophini kunye neelwandle zepanoriki kunye nembono yeentaba! Indawo egqibeleleyo kwindawo ethe cwaka ...
Indawo zokuThengisa kwiNdlela ephambili yokuThwala eTamaimo!
UKUthengiswa: Indawo ethe tye yentengiso kwidolophu yaseTamaimo kwesona sitrato sikhulu esiya eTeide. Ukuma kwebhasi kanye phambi kweofisi ....
Igumbi elinephuli ye-300m ukusuka elwandle!
UKUthengisa: Ipropathi enkulu ziimitha ezingama-300 ukusuka kunxweme olunesanti eLas Caletillas, Tenerife!
Igumbi elinephuli ye-300m ukusuka kwi-Banda eLas Caletillas!
Indlu ebabazekayo eGranadilla De Abona!
UGranadilla de Abona, uGranadilla de Abona Tenerife
UKUthengiswa: Kutsha nje indlu ibuyiselwe eGranadilla de Abona, Tenerife! Ukuba nako ukwakha imigangatho engaphezulu! Ibala eliphakathi lendlu! Indlu ilungele ukuhlala!
UGranadilla de Abona
Indawo ebanzi yolwandle e-El Poris !!
UKUthengiswa: Indawo enkulu yolwandle e-El Poris, Tenerife! Indlu enkulu enombono wolwandle ngeemitha ezili-150 ukusuka emanzini! Igcinwe kakuhle tata ngoku swing ...
Indlu yakudala yobukoloniyali ukubuyisa iZiko laseArona !!
UKUthengiswa: Indlu yakudala yobukoloniyali ukuba ibuyisele embindini wedolophu yakudala iArona, iTenerife! Indawo entle kakhulu kwindawo ethe cwaka ...
Indlu yobukoloniyali, indlu
INdlu enkulu yeKoloneli + yoMhlaba kwiZiko laseArona !!
UKUZithengisa: Indlu enkulu yobukoloniyali ukuyibuyisela embindini wedolophu yakudala iArona, iTenerife! Indawo entle kakhulu kwindawo ethe cwaka ...
Igumbi elitsha elikufuphi nePlaya De San Juan !!
UAgua Dulce, uGuia de Isora Tenerife
UKUZithengisa: Indawo entsha enabileyo kwimizuzu emi-3 kude kunxweme lwePlaya de San Juan, Tenerife! Indawo egqibeleleyo yendawo yokuhlala ezolileyo ...
Igumbi elikhulu leTerrace + eLokupaka eLa Perla !!
UKUthengisa: Ipropathi ebanzi enendawo enkulu esisangqa e-Playa de la Arena, Tenerife! Indawo egqibeleleyo kumbindi wePlaya de la Arena, ...
Igumbi eLos Abrigos i-150m Ukusukela kuLwandlekazi !!
I-Los Abrigos, iGranadilla de Abona Tenerife
Kuthengiswa izindlu ezintle eLos Abrigos, eGranadilla de Abona, Tenerife! Ipropathi ibekwe kwisitalato sokuhlala esizolileyo esiziimitha ezili-150 ukusuka ...
Igumbi 80 Iimitha ukusuka kuLwandle ePuertito !!
IPuertito de Guimar, iGuimar Tenerife
Amagumbi amathathu okulala athengiswa ePuertito de Guimar, Tenerife! Indlu enkulu iimitha ezingama-80 ukusuka elwandle kunye neemitha ezingama-400 ukusuka elwandle! ...
Igumbi elihle leemitha ezingama-200 ukusuka elwandle !!
I-Las Caletitas, uCandelaria Tenerife
Kuthengiswa indawo esecaleni kweelwandle eLas Caletitas, eCandelaria, eTenerife! Indlu entsha ekwimeko efanelekileyo nje iimitha ezingama-200 ukusuka elwandle. Ixhotyiswe ngokufanelekileyo, inikezwe kwaye ...
Indlu ebanzi ngokujonga kweLwandle kwiCandelaria
Ukuthengisa: Indlu enkulu eCandelaria, Tenerife! Indawo efanelekileyo kwindawo ethe cwaka yeemitha ezingama-200 ngaphezulu komphakamo wolwandle. Imbonakalo entle yephaneli ...
Uphuhliso olutsha: Izindlu ezinokuPaka zabucala eAlcala!
ukusuka € 142,800
Ukuthengisa: Ukukhetha amagumbi amatsha kwedolophu yaseAlcala, Tenerife! Indawo efanelekileyo kwindawo ethe cwaka yedolophu kwimizuzu emi-5 ...